Distrikan’i Port-Bergé : hiantsoana mpandraharaha ireo vokatra isan-karazany | NewsMada
Distrikan’i Port-Bergé : hiantsoana mpandraharaha ireo vokatra isan-karazany
Mahavokatra ny distrikan’i Port-Bergé, faritra Sofia, saingy hatramin’izao tsy mipaka any amin’ny tantsaha mpamboly ny tena vidin-katsembohan’izy ireo. Vokatra isan-karazany sy betsaka any an-toerana, ankoatra ny vary, ny katsaka, voanjo, paraky, lojy (black eyes) sy voamaina isan-karazany. Mampiavaka iny faritra iny, ny fisian’ny renirano mandalo ao aminy : Mahajamba, Bemarivo ary Sofia. Fisian’ireo renirano ireo ny ahafahan’ny distrikan’i Port-Bergé mamboly mandavantaona, satria lonaka mandrakariva ny tany. Betsaka sady tsara kalitao ny vokatra rehetra.
Nantsoin’ny tompon’andraikitra any an-toerana ireo mpandraharaha avy any amin’ny faritra hafa, mba hifampiraharaha mivantana amin’ireo tantsaha. Ny olana, sarotra ho azy ireo ny mahita lalam-barotra, indrindra ho an’ireo voamaina mampalaza ny faritra, toy ny lojy. Entanina ny mpandraharaha hifandray mivantana amin’ireo mpamboly, tsy hisian’ny fanararaotana ataon’ny mpanelanelana.
Ny lojy, ohatra, tokony hampidi-bola betsaka sady malaky ho an’ireo tantsaha. Telo volana monja dia azo jinjana ; raha ny hatsaran’ny tany indray, ahazoam-bokatra 3,5 t /ha. Tsy vitsy amin’ireo mpamboly any an-toerana, manana velaran-tany tsy latsaky ny 5 ha. Malalaka ny tsena any ivelany amin’ity karazam-bokatra iray ity, ka hiantsoan’ireo “Sojabe” fiaraha-miasa akaiky amin’ny mpandraharaha.
Mandalo ao Port-Bergé ny reniranon’i Sofia. Amin’iny RN-6 iny, misy ny tetezana lava indrindra, Tetezan’i Sofia, mirefy 863 m. Ankoatra izany ny reniranon’i Bemarivo. Mahasarika mpizahatany avokoa ireo renirano lehibe ireo, samy manana ny tantarany. Hahazoana mamantatra bebe kokoa ireo renirano ireo ny fisian’ny lakana azo hofaina. Afaka mitantara tsara momba ny tanànan’i Port-Bergé na Boriziny ireo tompon-tany na sojabe any an-toerana.
427 km Antananarivo hatreo Ambondromamy (RN4) sampanana mianavaratra, miditra amin’ny RN6. 166 km avy eo i Port-Bergé. Any Antsohihy kosa no misy seranam-piaramanidina; 130 km Antsohihy sy Port-Bergé.